WONDERFUL UNIVERSE: ကိုယ့်... ညနေခင်းများး ရဲ့ အလင်းရှင်
ညနေခင်း တစ်ခုရဲ့… နေဝင်စ ကောင်းကင် တစ်ဆုပ်တစ်ခဲ ဖွဖွလေးကျဲနေတဲ့ တိမ်တိုက်တစ်ခု အရောင်တွေ ပြောင်းလို့ ပုံသဏ္ဍန်တွေ ရွေ့နေတယ်… ဒါကောင်းကင် ကြီးရဲ့ ရင်ခွင်အောက်မှာပါ… အဆုံးအစမရှိတဲ့ သက်ရှိအိမ်မက်တစ်ခု အဖြစ် အသက်ဝင်နေလေရဲ့..။ညနေခင်းတစ်ခုတဲ့လား။ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ အလင်းမဲ့ ညနေခင်းတွေဟာ နေ၀င်ပီး မိုးချုပ်နေတတ်ခဲ့တာ ကြာခဲ့ပြီကော။ မှတ်မှတ်ရရပေါ့...။ကိုယ်တို့ချစ်ခြင်းဖွဲ့ရာဇ၀င်တွေရဲ့ အစမော်ကွန်းကို ရေးထိုးထားခဲ့တဲ့ မိန်ရာသီအရိပ်အာဝါသအောက်က...၁၂ လုံးတန်းလမ်းမလေးပေါ်မှာ....၂၂ ခုမြောက်သော ညနေခင်းလေးတစ်ခုဟာ နူးနူးညံ့ညံ့ဖူးပွင့်လို့...။အဲဒီ့ညနေခင်းလေးရဲ့ ကောင်းကင်မှာ..တိမ်တိုက်ကလေးတစ်ခု...ညင်သာဖွဖွ ရင်ခုန်ဖွယ်ရာ ရွေ့လျားနေခဲ့တာကို အမိအရ ပုံတူပန်းချီ ရေးဆွဲဖို့ ကိုယ်... ....စတင်ပြီး ကြိုးစားမိခဲ့တော့တယ်...။တိမ်ဆိုတဲ့သဘောကိုက အသွင်အရောင် ပြောင်းတတ်တာ....ပုံသဏ္ဍန်တွေ အမျိုးမျိုးဆောင်တတ်တာ....ကိုယ်.. သိထားပေမဲ့......အဲ့ဒီ တိမ်တိုက်တစ်ခုကို ကိုယ့် ညနေခင်းတွေထဲမှာ တယုတယနဲ့ ကိုယ် ကိုယ်တိုင်ပဲ အိပ်မက်တွေ သီဝေ စေခဲ့တော့တာ။ရှိသမျှ ကြယ်တွေ၊ လတွေ၊ တိမ်တိုက်တွေ၊ နောက်ပြီး နေမင်းပါမကျန် သူ့ရင်ခွင်ထဲ ထည့်ထားတဲ့ ကောင်းကင်ကြီးကို မလိုတမာ လှမ်းကြည့်ရင်းက တိမ်တွေ အသွင်အမျိုးမျိုး ပြောင်းရတာ သူ့ကြောင့်လို့ ကိုယ်.... စွဲချက်တွေ တင်နေမိတယ်...။ အင်းလေ၊ ဘ၀ဆိုတဲ့ သက်ရှိအိပ်မက်ကြီးထဲမှာ ဘယ်အရာတွေကရော တည်မြဲနေသေးလို့လဲ။မတည်မြဲခြင်းတွေကြားမှာပဲ ကိုယ်ဟာ အလင်းရှင် အတွက် ရာဇဝင်ကို ဖန်ဆင်းရေးသီနေခဲ့မိတာလေ.....ဒီ ညနေခင်းရဲ့ကောက်ရိတ်သိမ်း သီချင်းသံတွေကြားမင်းခြေလှမ်းတွေ အတွက် သွေးစွန်းနေတဲ့ ငါ့ဝိဥာဉ်မီးအိမ်လေးက လမ်းပြလို့ မင်းနှုတ်ခမ်းပေါ်ရောက်ရင် ချိုမြမယ့် ငါ့ရဲ့ခါးသက်သက် အမောပြေ ဝိုင်တစ်ခွက် ရှိတယ်.တရိပ်ရိပ်နဲ့ ရီဝေမူးယစ်စေတဲ့ ၀ိုင်တစ်ခွက်ဟာ မင်းပဲပေါ့။ညနေခင်း အလုပ်တွေပြီးဆုံးချိန်မှာ ကိုယ့်အိမ်အပြန်လမ်းတွေက မင်းကို တွေ့ရတော့မယ် ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ တက်ကြွလှပလို့...။မင်းနှုတ်ဖျားက ထွက်ကျလာတဲ့ စကားလုံးတိုင်းဟာ ကိုယ့်အတွက်တော့ ချိုမြတဲ့ ဆည်းလည်း သံစဉ်လေးတွေ၊ တစ်နေ့တာ အမောကို ဖြေဖျောက်ပေးနိုင်မဲ့ အားဆေးတွေပဲလေ။ခါးသက်သက် ချိုမြမြ ၀ိုင်တစ်ခွက်ကို စွဲလန်းတာမျိုးထက် အဆများစွာ ပိုပြီးတော့ကို မင်းကို ကိုယ်က လိုအပ်နေခဲ့သူပါ...။ကိုယ့်နှလုံးသွေးတွေနဲ့ လောင်စာဖြည့်ထင်းထားတဲ့ ချစ်ခြင်း အလင်းတွေအောက်မှာ ကိုယ် ကိုယ်တိုင်ရဲ့ ၀ိဥာဉ်တွေ လင်းချင်းခဲ့ရတော့တာ...။တဖြည်းဖြည်း… မှောင်ရိပ်တွေ ပျိုးလို့ ညရောက်တော့မယ်လေ…။ ငါ့ကို ဒီအသိတွေက လုယက်တိုက်ခိုက်နေတယ်ဒီလိုနဲ့ ညတွေမှာ….ငိုကြွေးနေတတ်တဲ့ ငါ့မျက်ဝန်းရဲ့ထောင့်စွန်းနား မင်းဝိဥာဉ် ကို မွေးဖွားခဲ့တယ် ကျလာမယ့် မျက်ရည်တွေက မင်းအတွက်လှပမယ့် ညအိပ်မက်တွေကို အလိုတကျ ဖန်ဆင်ပေးဖို့ပေါ့… အလင်းတွေကို ၀ါးမျိုစားသုံးရင်း အမှောင်တွေက ညနက်ထဲ ဆွဲခေါ်နေကြတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ မီးအိမ်လေး မီးစာကုန်ခမ်းသွားမှာ စိုးလှပါရဲ့.....။ကိုယ့်နှလုံးသွေးတွေရဲ့ မီးစာဟာ မင်းဆီက အကြင်အနာတွေကနေ အသက်ဆက်နေခဲ့တာပါ...။မင်းသာ ကိုယ့်ကို မချစ်တော့ရင်၊ မင်းသာ ကိုယ်ကိုထားသွားရင် ဆိုတဲ့ ပူပန်မှုတွေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့စိတ် တိုက်ခိုက်ခံရတိုင်း လေပွေဝှေ့ခံရသလို မီးစာလေးက လှုပ်ခတ် တုန်ရင်ရပြန်တယ်။ကိုယ့်ကို မင်းရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေနဲ့ လုံခြုံနွေးထွေးပေးလှည့်ပါ။ကိုယ့်ညခင်းတွေရဲ့ အလင်းကို ပြုစုပျိုးထောင်ပေးလှည့်ပါ။မင်းနဲ့ မတွေ့ရတဲ့ နေ့ရက်တွေတိုင်းမှာ ကိုယ့်ရဲ့ ညနေခင်းတွေ သွေးပျက်စရာ ကောင်းလောက်အောင် ခြောက်ခြောက်ခြားခြား နိုင်လွန်းလှလေတယ်။ဒီလိုနဲ့ အခါများစွာ ကိုယ်ဟာ ငိုကြွေးမိတတ်ပြန်ရော...။ချစ်သူလေး၊ ကိုယ့်ဝိဥာဉ်ရဲ့ တစ်ခုတည်းသော အလင်းရောင်၊ ကိုယ့်ဘ၀ရဲ့ အရာခပ်သိမ်းဟာ မင်း....။ဒီလိုနဲ့ ..... ကိုယ်ဟာ လင်းတလှည့် မှောင်တချီ...၊ချစ်သူ....မင်း...ရဲ့ အိပ်မက်ရာသီတွေ လှပကြည်နူးစေဖို့ တေးတွေသီလို့....။ဒါပေမယ့်…. ငါချစ်တဲ့ ငါ့ရင်ခွင်က တိမ်လေးတွေ ပျောက်ဆုံးသွားစေမယ့် သီချင်းသံတွေနဲ့ ဝေးသွားစေမယ့်… ညတွေ ရောက်မှာကိုတော့ မုန်းမိတယ်။။။။တိမ်တွေက လေနှင်ရင် လွင့်ပါးသွားတတ်ကြတယ်။ တိမ်တွေက မိုင်းညှို့ အုံ့ဆိုင်းပြီးရင် မိုးအဖြစ်ရွာမချပဲ ပျောက်သွားတတ်ကြ ပြန်သေးတယ်။ တိမ်တွေက မဲမဲမှောင်မှောင်ဘ၀ကနေ မိုးရေစက်တွေ အသွင်ပြောင်းသွားပြီးရင်လဲ ကောင်းကင်ထဲမှာ သူ့အရိပ် အကျွင်းအကျန်လေးတောင် ခြေရာချန်ထားရစ်ဖို့ မေ့လျှော့ချင် မေ့လျှော့တတ်သေးတာ။ တိမ်တွေက အပြောင်းအလဲ မြန်တယ်။ တိမ်တွေက..... ......... .....ဆယ့်နှစ်လုံးတန်း လမ်းမပေါ်က နှစ်ဆယ့်နှစ်ခုသော ညနေခင်းလေးတစ်ခုမှာ ကျွန်တော့်ရင်ဘတ်ထဲ အမှတ်တရ ရေးခြစ်ခဲ့တဲ့ တိမ်တိုက်လေးရေ....ဘယ်လို လေပြင်းမုန်တိုင်း တိုက်တိုက် မင်း မလွင့်ပျယ်သွားပါနဲ့။ပြိုမယောင် ညာသံပေးပြီးတော့မှလဲ မင်း ထွက်ပြေးမသွားပါနဲ့။မင်း ငါ့ကို စွတ်စိုအောင် သည်းသည်းထန်ထန် ရွာချချင် ရွာချလိုက်ပါ။ဒါပေမဲ့ ခြေရာလေးတွေတော့ မင်း မချန်ရစ်ခဲ့ပဲ ငါ့အပါးက စွန့်ခွာ မသွားပါနဲ့။ပြောခဲ့ဖူးတာကိုပဲ အဖန်တလဲလဲ ကိုယ်... ပြန်ပြောပါရစေ။မင်းအတွက်... ကိုယ်... အိပ်ယာဝင်တေးတွေ သီဆိုပေးပါရစေ...။မင်းရဲ့ချစ်ခြင်းတွေ၊ မင်းကို ချစ်ခြင်းတွေနဲ့ ထွန်းညှိလင်းချင်းခဲ့တဲ့ ကိုယ့်ဝိညာဉ်အတွက် ကိုယ့်နှလုံးသွေးလောင်စာကို ဖြည့်တင်းပေးလှည့်ပါ......။ ဒီလိုနဲ့ ကိုယ်ဟာ ချစ်သူမရှိတဲ့ ညနေခင်းတွေ၊ ညတွေကို မုန်းတီးတတ်လာခဲ့တော့တယ်.....။ သေချာတယ်.....။ကိုယ့်ဝိဥာဉ်ဟာ မင်းမရှိရင် အလင်းမဲ့စွာ ပျောက်ဆုံးရပြန်အုံးတော့မယ်။ ။ The hunger for love is much more difficult to remove than the hunger for bread. (Mother Teresa)______________________________________________________ဒီပို့စ်လေးကို “ကျွန်တော့်ညနေခင်း ပန်းချီကားမှာ ရေးခြစ်ခဲ့သော အလင်းဖွဲ့ တိမ်တိုက်တစ်ခု” ဆိုပြီး တင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲတာလေးကို ပြန်တင်ချင်လို့ နဲနဲလေး ပြုပြင်ပြီး ဆားချက်ထားတာပါ။ မဖတ်ရသေးတဲ့ မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကတော့ အသစ်ပေါ့။ မဖတ်ဖူးပြီးသူ မိတ်ဆွေများကလည်း နောက်တစ်ခေါက် ထပ်အားပေးသွားရင် ကျေနပ်ပါတယ်ဗျားးး။ချစ်ညီလေး မျောက်မျောက် (ကျွန်တော့်အခေါ် မျောက်ငို) ရဲ့ ကဗျာလေးကို ခံစားရေးဖွဲ့ပေးထားတဲ့ စကားပြေလေး တစ်ပုဒ်ပါ။ မေတ္တာဖြင့်မိုးကုတ်သား
ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင် မေသန်းနုပန်းတွေရေလောင်းရင်း ဆိုနေတဲ့သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို မြင်ယောင်နေမိတယ်တိမ်တွေဆိုတာ............
ကဗျာက ဘာမှ မဟုတ်ပေမယ့်စကားပြေက နုရွလှပ နေလိုက်ပုံများ..ကောင်းပါ့
ဖတ်ဖူးပြီးပြီဗျ။ ကိုကြီး စိတ်မျောက်မျောက်ရဲ့ ကဗျာလှလှလေးကို ကိုဘိုကြီးက နုနုရွရွလေး လက်စွမ်းပြထားတာ ဖတ်ဖူးတယ်လေ။ ခုပြန်ဖတ်တယ် ဘာဖြစ်လဲ။ ကောင်းတယ်လေ။ ကောင်းပါတယ်ဆို။ အဟဲ။ တကယ်ကောင်းတာပါ ကိုဘိုကြီးရေ....
မင်းနှုတ်ခမ်းပေါ်ရောက်ရင် ချိုမြမယ့်ငါ့ရဲ့ခါးသက်သက် အမောပြေ ဝိုင်တစ်ခွက် ရှိတယ်...။ဘာခံစားချက်နဲ့ပဲ ရေးခဲ့ရေးခဲ့ဖတ်လို့ကောင်းနေတာတော့အမှန်။